Home Wararka Xildhibaankii koowaad ee golaha Shacabka ee deeganada oo Garowe lagu doortay
Cabdi Ibraahin Warsame Qowdhan ayaa loo doortey Xildhibaanka kursiga kursiga tirsigiisu yahey hop 196 ee Gollaha shacabka Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Qowdhan ayaa tartan uusan ka furneyn kursigiisa, waxaana la tartamay mid ka mid ah ilaaladiisa oo Malxiis ahan uga qeyb galay.
Cabdi Ibraahim Qowdhan ayaa hadda ah Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Maaliyadda maamulka Puntland.
Afar kursi ayaa hadda dhiman kuwaasoo qeyb ka ah doorashada maanta lagu balamay in Garowe lagu doorto.
Previous articleTaliyaha Booliiska Puntland oo “Deni” ku eedeeyay Boobka Doorashada
Next articleMarekanka oo walaac ka muujiyay halista kororka awoodda Al Shabaab
Dad lagu tuhmayo Al Shabaab oo lagu qabtay magalaada Galkacyo
Dowladda Farmaajo Runta ayey Sheegtay Markii ay tiri “Ma jiraanciidan tababar...